मकवानपुर । लामो समय राजनीतिमा होमिएका प्रकाश पाण्डे (प्रलोक) अहिले नेकपाका जिल्ला सचिवालय सदस्य हुन् । तत्कालिन माओवादी आन्दोलनमा उनको भूमिका महत्वपूर्ण थियो । आन्दोलनका क्रममा लागेका गोलिका छर्राहरु उनको शरिरमा अझै पनि छ । उनी तत्कालिन माओवादीको सहायक संगठन वाइसिएलका केन्द्रिय कोषाध्यक्ष समेत भए । उनी एकताका प्रचण्डको सुरक्षा गर्न तैनाथ गरिएको जनमुक्ति सेनाको […]
पूर्वि मकवानपुरको बकैया गाउँपालिका कोरोनाविरुद्धको अभियानमा सक्रिय छ । अध्यक्ष उपाध्यक्ष, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, अन्य जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरु अभियानमै नियमित जुटिरहेका छन् । राहत वितरण, स्वास्थ्य परीक्षणका काम निरन्तर भइरहेको छ । गाउँपालिकाले कृषि, उत्पादन र विकास निर्माणको कामलाई केही सहज बनाउने प्रयत्न गरिरहेको छ । गाउँपालिकाका अध्यक्ष दामोदर खनालसंग तु खबरले (कोरोना विशेष) गरेको […]
मकवानपुर । माइकल रामचन्द्र अर्याल, यो नाम मकवानपुरमा मात्र होइन, लामो राजनीतिक जीवन भएकाहरुबीच अन्यत्र पनि चर्चित नाम हो । राजनीतिक रुपमा लामो यात्राका एक यात्री हुन् माइकल । उनको जीवन संघर्षमय छ । झन् आजको दिन त उनको जीवनको शायद सबैभन्दा महत्वपूर्ण दिन हो भन्दा अन्यथा नहोला । २०३६ साल वैशाख १४ गते अर्थात् […]
मकवानपुर थाहा नगरपालिकाले कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि विभिन्न कार्यक्रमहरु संचालन गरिरहेको छ । नगरपालिकाले स्वास्थ्यकर्मी परिचालनदेखि दैनिक रुपमा गरिने क्रियाकलापको रिपोर्ट प्रत्येक दिन बेलुकी सार्वजनिक गर्ने गरेको छ । खाद्यन्नको आपूर्ति, क्वारेन्टिनको व्यवस्थापन, विदेशबाट आएकाहरको कन्ट्र्याक ट्रेसिङ लगायत थुप्रै राम्रा कामहरु थाहा नगरपालिकाले गरिरहेको छ । त्यसतः घरघरमै पुगेर आरडिटी टेष्ट, […]
काठमाडौँ ७ बैशाख । कोरोना भाइरसको विश्वव्यापी सङ्क्रमणबाट बच्न नेपालमा सुरक्षाका उपाय अवलम्बनसहित रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारका काम भइरहेका छन् । महामारी बिफल पार्न सरकारले हवाई र स्थलमार्गबाट आवागमन रोकेर गत चैत ११ गतेदेखि लकडाउन जारी गरेको छ भने परीक्षणको दायरालाई जिल्ला–जिल्लामा विस्तार गरेको छ । सरकारले जारी गरेको लकडाउनलाई सबै दल, नागरिक क्षेत्र र […]
काठमाडौँ २९ चैत । कोरोनाविरुद्धको लडाइँ जित्नका लागि सरकारले लकडाउन गरेको छ । सोही क्रममा नागरिकलाई राहत दिने लक्ष्यका साथ सरकारले १५० यूनिटसम्म विद्युत् खपत गर्ने ग्राहकलाई २५ प्रतिशतसम्म महसुल छुट दिने निर्णय गरेको छ । यस्तै लकडाउनमा सञ्चालन हुने उद्योगलाई समेत ३० देखि ५० प्रतिशतसम्म महसुल छुट दिने निर्णय गरेको छ । यस्तै, यही […]
मकवानपुरको राक्सिराङ् गाउँपालिका विकट क्षेत्र मात्र होइन, दुरीको हिसाबले सदरमुकामसँग नजिक भएपनि विगतदेखि पिछडिएको भूभाग हो । यस क्षेत्रको विकास र समृद्धका लागि स्थानीय तह पुनर्संरचना हुनु अगावैदेखि निकै प्रयास गरेपनि सदैव पछिपरेको थियो । जिल्लाको पश्चिमी व्यापारिक केन्द्रसँग जोडिएको राक्सिराङ्का अधिकांश जनता अहिलेपनि गरिबीको रेखामा छन् । गाउँपालिका गठनपछि स्थानीय तहको निर्वाचनबाट चुनिएका अध्यक्ष […]
सिन्धुली जिल्ला ऐतिहासिक महत्व बोकेको जिल्ला हो । विकासको दृष्टिकोणले पछाडी परेको मानिने यो जिल्ला संघीयताको कार्यान्वयनको चरणमा गइसकेपछि विस्तारै विकासमा बामे सर्दैछ । यसै सन्दर्भमा कमलामाई नगरपालिकाका मेयर खड्गबहादुर खत्री यो नगरपालिकालाई हरेक हिसाबले विकसित बनाउन क्रियाशील भइरहेका छन् । प्रस्तुत छ, तु खबरका समाचार प्रमुख बलराम पुडासैनी ले मेयर खत्रीसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित […]
धादिङबाट निर्वाचित शालिकराम जम्कट्टेलले अहिले बागमती प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय सम्हालिरहनु भएको छ । नेकपा बागमती प्रदेश संसदीय दलका उपनेतासमेत रहनुभएका मन्त्री जम्कट्टेलले मन्त्रिपरिषद् बैठक, पार्टीको बैठकमा समेत फरक बिचार राख्नुहुन्छ । प्रदेशमै पहिलो पटक संचार रजिष्ट्रारको कार्यालय स्थापना गर्न विभागीय मन्त्रीको रुपमा भूमिका निर्वाह गर्नुभएका जम्कट्टेलले प्रदेशका संचार क्षेत्रको विकासमा विभिन्न योजना […]
हेटौंडा बागमती प्रदेशको राजधानी भएपछि यहाँ दिनानुदिन आवास निर्माण भइरहेका छन् । तर, ती आवासीय क्षेत्र व्यवस्थित नहुँदा सहरको स्वरुपनै बिग्रने हो की भन्ने चिन्ता छ । घरजग्गा व्यवसायी संघले यसलाई सुधार गरी व्यवस्थित सहर निर्माणमा जुटेको दाबी छ । अहिले हेटौंडा उपमहानगरपालिकाले कित्ताकाट रोकेको छ । तर, संघले भने कित्ताकाट रोक्न नहुने भन्दै पटकपटक […]
काठमाडौं, ६ फागुन । बागमती प्रदेशमा दुईतिहाई बहुमतको सरकार चलाइरहेको नेकपाभित्र अन्तरकलह देखा परेको छ । नेकपाका प्रदेश सांसदहरुको असन्तुष्टि मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव ल्याउने तहसम्म पुगेको छ । कतिपय सांसदले मुख्यमन्त्रीविरुद्ध हस्ताक्षर अभियान सञ्चालन गरेको चर्चा समेत चलिरहेका बेला नेकपा प्रदेश इन्चार्ज अष्टलक्ष्मी शाक्यले समेत मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल पार्टीभित्र अल्पमतमा परेको स्वीकार गर्नु भएको छ […]
१. नेपाल पत्रकार महासंघ केन्द्रले अहिले के कस्ता कामहरु गरिरहेको छ ? – सर्वप्रथम त यहाँलाई धेरै धन्यवाद । नेपाली पत्रकारहरुको छाता सङ्गठन नेपाल पत्रकार महासंघको ऐतिहासिक साधारणसभा एवम् विधान अधिवेशन गएको फागुन ९ र १० गते पोखरामा सम्पन्न भएको छ । त्यसअघि विराटनगरमा सम्पन्न प्रदेश एवम् जिल्ला अध्यक्षहरुको राष्ट्रिय सम्मेलन, चितवनमा सम्पन्न पत्रकार महिलाहरुको […]
मकवानपुर । प्रदेश नम्बर ३ का मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले प्रदेशको राजधानीको विषय हिउँदे अधिवेशन भित्रै टुङ्गोमा पुग्ने बताएका छन् । आज तु खबरसंगको कुराकानीमा उनले राजधानी कहाँ रहने भन्ने बारेमा केन्द्रीय नेतृत्वमा सहमति भइसकेको बताए । थोरै प्राविधिक कुरा छ, तर एक हिसाबले सहमति भैसक्यो, मुख्यमन्त्री पौडेलले भने । राजधानी कसैलाई घर पायक पार्ने आधारमा तोकिने […]
मकवानपुर २९ माघ । प्रदेश नम्बर ३ का मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले हेटौंडामा १६/१६ मिटर सडक विस्तार गर्ने बताएका छन् । आज तु खबरसंग बिशेष कुराकानी गर्दै उनले सडक विस्तारको विषयमा केन्द्रिय सरकारसंग छलफल गरेर आफुहरु अघि बढिरहेको बताएका हुन् । हेटौंडाभित्र २५/२५ मिटर सडक विस्तार नगरी १६/१६ मिटरमात्रै विस्तार गर्ने अनि बाईपास निर्माण गर्ने तयारी […]
मकवानपुर २९ मंसिर । मकवानपुरको हेटौंडामा २०४३ साल असोज २० गते जन्मिएर आफ्नो बाल्यकाल मकवानपुरमै बिताएका विमल सञ्जेल अहिले बैकिङ् क्षेत्रमा क्रियाशील छन् । सञ्चार क्षेत्रमा कुनै बेला राम्रो दख्खल राख्ने उनी अहिले बिहान सबेरैदेखि राति अबेरसम्म बैंकको व्यवस्थापनमा खटिएका भेटिन्छन् । मनहरी गाउँपालिकामा साँग्रीला डेभलपमेन्ट बैंकको शाखा प्रमुखको रुपमा अहिले सञ्जेल कार्यरत छन् । […]
भीमफेदी गाउँपालिकाको उपाध्यक्ष निर्वाचित हुँदा के कस्ता समस्याहरु थिए ? -बाटोघाटोको असुविधा, गुणस्तरीय शिक्षाको समस्या, स्वास्थ्य उपचारको अभाव, मानिसहरुमा जनचेतना तथा तालिमको कमी, उत्पादन भएका चिजबिजहरुले बजार र उचित मूल्य नपाउनु, आर्थिक, भौतिक, सामाजिक स्तरमा पनि सम्भावना भएर त्यति विकास हुन नसकेको अवस्था थियो । अब बिस्तार हामीले गाउँपालिकाको नीति तथा योजनाका कारण यि सबै […]
मकवानपुर । हेटौँडामा रहेको नारायणी मलमा आजबाट बास्कीन एण्ड रबिन्स आइसक्रिम सपको सुरु भएको छ । भीमफेदी गाउँपालिका बस्ने दीपेन्द्र थापाले संचालनमा ल्याएको सो शोपको हेटौंडा उपमहानगरपालिकाका मेयर हरिबोल महतले शुभारम्भ गरेका हुन् । स्वेदेशमै केही गर्न सकिने विश्वासका साथ व्यवसाय सुरु गरिएको उनले बताए ।
मकवानपुर १५ असोज । राजन खरेल नेपाली काँग्रेस पार्टी कार्यालयका मकवानपुर जिल्ला सदस्य तरुणदल मकवानपुरका सल्लाहाकार पनि हुन् । उनको लुब्रीकेन्ट सम्बन्धि आफ्नो व्यवसाय छ र समाजसेवामा जतिखेर पनि तत्पर रहनु पर्छ भन्ने मान्यता राख्छन् । राप्रपा नेपालका युवा मोर्चाका मकवानपुर जिल्ला अध्यक्ष भई सक्रिय रुपमा काम गर्दै आएका खरेलले करिब ६ वर्षको सक्रियता पछि […]
जी.न्यौपाने मकवानपुर ३० साउन । कोरीया यूवा पुस्ताको लागि सहज गन्तव्य भएको कारणले अधिकाँश युवा पुस्ता कोरीया जान आकर्षीत भएको देखिन्छ । अरु केहि नजानेपनि भाषा सिकेरै भएपनि कोरीया जाउँ भन्ने यूवाहरु पनि थुप्रै छन् । नेपाली वातावरणमा काम पाउने, पारिश्रमिक पनि राम्रै हुने भएकोले कोरीयामा राम्रो रोजगारीको अवसर भएको र सुरक्षाको हिसावले पनि कोरीया […]